Xaalada Muqdisho oo saaka degen iyo Dagaalo xalay ka dhacay. – SBC
Xaalada Muqdisho oo saaka degen iyo Dagaalo xalay ka dhacay.
Xaalada Magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ayaa saaka waxaa laga dareemayaa degenaansho aan la isku haleynkarin iyadoona ay weli isku horfadhiyaan goobahii lagu dagaalamay labada dhinac ee is haya .
Degmooyinka Hodan Howl wadaag iyo aaga Suuqa Bakaaraha ayaa laga dareemayaa degenaansho kooban, inkastoo aan jirin isku socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana sidoo kale hawanaya suuqa Bakaaraha oo isago aan ka socon ganacsigii lagu yiqiin maadaama ay halkaasi isku hor fadhiyaan ciidamada DKMG ah iyo ciidamada Amisom oo isku dhinac ah iyo xoogaga xarakada Alshabaab.
Dhinaca kale marka laga yimaado degenaanshaha saaka ka jira Magaalada Muqdisho ayaa waxaa jirta in xalay halkaasi ay ka dheceen dagaalo xoogan oo labada dhinac waa Xarakada Alshabaab iyo DKMG ah ku dhexmaray deegaano ay ka mid tahay Degmada Boondheere.
Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday dagaalkii xalay waxaana la sheegay in weerar ay xarakada Alshabaab ku qaaday aaga Degmada Boondheere kaga beegan Madaxtooyada Soomaaliya .
Dagaalkaas ayaa ahaa mid culus waxaana saraakiil ka tirsan DKMG ah oo la hadlay Saxaafada ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka kaga yimi xarakada Alshabaab aagaasi.
Lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi laakin sida ay ku waramayaan ilo wareedyo aagaasi ku sugan khasaaraha ayaa ah mid jira oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
Sikastaba ha ahaatee dagaalkan xalay ka dhacay waqooyiga Muqdisho siiba Deg Boondheere ayaa noqonaya mid aag dagaal oo horleh ka furaya magaalada Muqdisho maadaama loolanka dagaal uu maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa dhanka Koonfureed ee Muqdisho,